လိင်လိုးဂိမ္းမှာ Yaoi လိင်ဂိမ်းများ
သင်ပင်ပန်းမှာခြင်း၏မရှိခြင်းအခမဲ့လိင်ဂိမ်းများမှမြှုပ်နှံ Yaoi? ကောင်းစွာ၊အလွန်ကြီးစွာသောသတင်းရရှိနောက်ဆုံးအနှံ့လာသောပလက်ဖောင်းမှမြှုပ်နှံပေးခြင်းမှလက်လှမ်း။ ကျွန်တော်တို့ပထမဦးဆုံးစတင် Yaoi လိင်ဂိမ်းများ၊ဒါကြောင့်အကြောင်းပြချက်နှင့်တစ်ဦးတည်းသာအကြောင်းပြချက်:ကမ္ဘာကိုပြဒါဟာပိုမိုလွယ်ကူခဲ့ပြီဘယ်တော့မှကစားရန်ပျော်စရာ၊လိင်လိုးဂိမ်းအွန်လိုင်း။ အိုး၊မီသင်စဉ်းစားနေကြောင်းအဆပ်ဖို့ရှိသည်သွားဖို့တစ်ဦးလက်မောင်းတစ်ဦးခြေထောက်အတွင်းအပြင်–ငါသိစေကောင်းကောင်းရှေ့ဆက်အချိန်ရဲ့အခမဲ့ပူးပေါင်း!, မှန်တယ်:သင်ရနိုင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုျကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးရဲ့ဧရိယာဖြုန်းဖို့မလိုဘဲတစ်ပြား။ ကျနော်တို့တည်ဆောက်ကွန်ယက်ပေါ်တစ်ဦး freemium မော်ဒယ်ဘယ်မှာသင်သာပေးဆောင်ကြလျှင်သင်အမှန်တကယ်ချင်တယ်။ အားလုံးဂိမ်းများများမှာ ၁၀၀%အခမဲ့နှင့်အသင်ကောက်နှင့်ရွေးချယ်သောစားနပ်ရိက္ခာသင်လိုချင်တာဝယ်ဖို့ငြိမ်ဝပ်နှင့်အတူ။ ဒီကိုဆိုလိုသည်ကြောင်းရှိ၏သုညစွန့်စားမှုရတဲ့မှကြွလာသောအခါအတွင်း–တော်တော်အေးမြ၊အယ်? ယနေ့အချိန်တွင်၊ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့အကြောင်းနည်းနည်းရရှိနိုင်သည့်အဘယ်အရာကိုပေါ်မှာဤအံ့သြဖွယ်ပလက်ဖောင်းနှင့်အဘယ်ကြောင့်ငါဒါကြောင့်စိတ်ချယုံကြည်အနာဂတ်မှာ။ ဒါကြောင့်၊ရဲ့ပြောဆိုကြကုန်အံ့ဆိုင်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ခရီးနှင့်သင်ရကောင်းတစ်စိတ်ကူးမယ့်။
လူတိုင်းသိသောအရွယ်အရေးပါပါတယ်၊မှန်သော? ဒီအအတိအကျအကြောင်းပြချက်အဘယ်ကြောင့်ကျွန်တော်စႏုိင္ရန္ရောက်စေဖို့သင်ကောင်းတစ်ခုစုဆောင်းမှု၏ဂိမ်းအမည်ကြောင်းဖွယ်ရှိမြင့်မားကိုက်ညီတဲ့သင့်ရဲ့အကျိုးစီးပွား။ ငါသည်အဘယ်သို့ဆိုလိုဘူး၊အတိအကျ? ကောင်းစွာ၊သင်သိစေခြင်းငှါအဖြစ်၊အများကြီးရှိပါတယ်ဂိမ်းအမျိုးထွက်ရှိနှင့်အားလုံးမဟုတ်သူတို့ကိုအထူးသဖြင့်ကြီးမြတ်၏။ မှာ Yaoi လိင်ဂိမ်းများ၊ကျွန်တော်တစ်ဦးစုဆောင်းမှုနှင့်အတိုင်းအတာများ၏ခေါင်းစဉ်အနှံ့တစ်ဦးကောင်းများဘော်ဒါမည်သို့ပင်သင်သည်အဘယ်သို့၏ကြီးမားထဲသို့ဆိုရင်၊အဲဖွယ်ရှိကြောင်းအရာတစ်ခုခုသင့်ရဲ့ဖန်စီ။, ပဲပြောပေါ့မယုံနိုင်လောက်အောင်ကြေညာဖို့ဂုဏ်ယူကြောင်းအတွင်းပိုင်းရှိပါတယ်၊၁၄ အခမဲ့ဂိမ်းများနှင့်အတူ၊နောက်ထပ် ၃ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ကြောင့်အတြက္အတွက်လာမယ့် ၆ လသို့မဟုတ်ဒီတော့! လောက်ဆိုကျနော်တို့အလေးအနက်ကယာဉ်နဲ့အလိုရှိသည်အဖြစ်များစွာသောရွေးချယ်မှုများနှင့်ရွေးချယ်မှုဖွင့်အဖြစ်တတ်နိုင်သမျှ။ အပို၊အပိုပစ္စည်း။ အဲစာသားကကြာအားလုံးသင်တို့အဘို့အရထုတ်ပြန်ဖို့ပိုပြီးသီးသန့်ခေါင်းစဉ်။ အိုးဟုတ်ကဲ့–ဤသီးသန့်ဂိမ်း!, သင်တွေ့မည်မဟုတ်ထိုသူတို့ဘယ်နေရာမှာမဆိုအွန်လိုင်း၊ဒါကြောင့်ထိကပေါက်တက်နှင့်အဆင်သင့်ရတာပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သင်အပေါ်လိင်လိုးပျက်မည်မဟုတ်ခုခံတွန်းလှန်ရန်တတ်နိုင်။
မှုအရာတို့ကိုစောင့်ရှောက်ဖို့ရိုးရှင်းပြီးသေချာအျလိုက်ဖက်တဲ့၊ဒါဟာတကယ်ကိုအရေးများအတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ပေးခြင်းအဧည့်ဖို့စွမ်းရည်ကိုကစားကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂိမ်းအဘယ်သူမျှမကိစ္စအဘယျသို့စက်ကိရိယာသူတို့အသုံးပြု။ ရလဒ်အဖြစ်၊အားလုံးကျွန်ုပ်တို့၏အခြေခံအဆောက်အဦပေါ်တွင်တည်ဆောက်သည်ဘြတ္၊ဒါကြောင့်နေသမျှကာလပတ်လုံးသင်နှင့်အတူတပ်ဆင်ထားပြီး Chrome၊ေပ၊မြေခွေးသို့မဟုတ်အော်၊သင်ရှိသည်လိမ့်မယ်အဘယ်သူမျှမကိစ္စရပ်များကိုသမျှသို့ရတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂိမ်းနှင့်ပျော်မွေ့အားလုံး၏သူတို့ကို။, ကျနော်တို့နောက်ထပ်ဤအသိုင်းအဝိုင်းနှင့်အတူမိုဘိုင်းဂိမ်းကစားခြင်းအတွက်စိတ်လွန်း–အားလုံးဂိမ်းအလုပ်ချောမွေ့စွာအပေါ်အလုပ္လုပ္ပါနှင့်လက်ကိုင်ဖုန်းအတွက်၊ပေါင်းသင်ရှေ့ဆက်သွားနှင့်အချိန်ကိုက်သင်တို့၏သက်သာအလွယ်တကူအောင်၊အသွင်ကူးပြောင်းမှုနှစ်ခုအကြားကိရိယာပိုမိုလွယ်ကူပြုဘူးသည်ထက်ကပြောပါတယ်။ နေစဉ်ကျနော်တို့နောက်ဆုံးမှာရှိအစီအစဉ်များအတွက်အော့ဖ်လိုင်းညာဂ်ာ၊အခုချက်ချင်း၊ကျနော်တို့နှင့်အတူပျော်ရွှင်လက်ရှိပုံစံရှိသည်များနှင့်အမှန်တကယ်ယုံကြည်ကြောင်းအခွင့်ခြေလှမ်းရှေ့ဆက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စီမံကိန်း။ ဒါဟာဖြစ်ရမည်အကြောင်းရာက္ဇာဂိမ်းကစားခြင်းသည်ကျွန်တော်တို့၏အာရုံစိုက်နှင့်ကျွန်တော်အမြဲသောသေချာအောင်ရှေးရှေးင်းတို့၏ထုတ်ကုန်အပေါ်ရနိုင်ဝင်ရောက်ခြင်း–အဒါင္းလိုအပ်!, အသံတူလိင်လိုးဂိမ်းကစားအတွေ့အကြုံသင်ကြိုက်သလိုနှင့်အတူပါဝင်–အဘယ်ကြောင့်မပူးပေါင်းအခုအချိန်မှာ? သိကအာရုံစေသည်!
မင့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ Yaoi ဂိမ်း၊သင်ဖြစ်စေခြင်းငှါထွက်စစ်ဆေးနေအရာရှိဖိုရမ်များသို့မဟုတ်၊တနည်းအားဖြင့်၊စကားပြောကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖက်ဆာ။ ကျနော်တို့မယ့်ရှည်လျား၏အမြင်အတွက်အသေးစားအသိုင်းဒီလိုနိုင်ချောမွေ့ရန်ဆွေးနွေးသည်၏အစွမ်းကုန်အရေးပါမှုသည်။ ကျွန်တော်ပေးချင်သင်ယံလိင်ဂိမ္းချမ်းသာ၊အပေါင်းတစ်နေရာမှချက်တင်နှင့်အတူအခြားသူများအပေါ်အလွန်တူညီခေါင်းစဉ်! သင်တွေ့ပါလိမ့်မယ်ပတ်ပတ်လည် ၁၅၀ သစ်သောပို့စ်များများမှာထည့်သွင်းဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖိုရမ်များအပေါ်တစ်ဦးနေ့စဉ်အခြေခံ၊အပေါင်းဖက်ဆာဗာသည်လူနေနှင့်အတူကျော် ၆၊၀၀၀ ဖွဲ့ဝင်များ–တော်တော်လေးသပ်ရပ်၊အယ်?, အဲကြီးညစ်ညမ်းရှိပါတယ်လွန်း၊အပေါင်းတစ်နေရာနိုင်ပါတယ်ဘယ်မှာတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်သူများအားပေးသူတို့ကိုသင့်ရဲ့တုံ့ပြန်ချက်အပေါ်ဘယ်လိုအဂိမ်းများများကောင်းမွန်စွာလည်ပတ်ကြသည်။ ကျွန်တော်တို့တကယ်လိုလာမှပေါ်၌ပြောပြကျွန်တော်တို့ကိုသင်ထင်သောအရာကို–အရေးပါသောအဖို့အနာဂတ်စီမံကိန်းမှာဝဲအတွက်တိုးတက်မှုလျှင်ကျနော်တို့မသိခဲ့ပါဘူးသင်သည်အဘယ်သို့ထင်။ ကျွန်တော်တို့ရှေ့ဆက်မသွားပေးခြင်း၊ရှေးရှေးအဖို့စွမ်းရည်ကိုတိုက်ရိုက်ချက်တင်နှင့်အတူကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖွဲ့သည်အဘယ်သွားစေပြီးမှကွဲပြားခြားနားအားလုံး၏အခြားခရီးထွက်ရှိပါတယ်။ ဒီ Yaoi လိင်ဂိမ်းများအကြောင်းကိုအားလုံး!
ပိုပြီးအတွင်းပိုင်း Yaoi လိင်ဂိမ်းများ
ဖြစ်စွာသင်တို့နှင့်အတူရိုးသားသော၊ငါသာအနည်းငယ် toughed အပေါ်အကောင်းဆုံးအပိုင်းလေးတွေအ Yaoi လိင်ဂိမ်းများ၊ထိုသို့ဖြစ်နိုင်ကောင်းတစ်စိတ်ကူးသင်တို့အဘို့အလာအပေါ်အတွက်နဲ့ကိုယ်အဘို့ကိုတွေ့မြင်ရာကိုအမှုအရာကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏။ ဤသည်ပူသော၊လိင်တူပုံစံလိုးဂိမ်းကစားဝက်ဆိုက်မကြောက်ဖို့ဝန်ခံ။ မယ်လျှင်လက်ဖက်ရည်သင်တို့၏ခွက်ဖလား–ကောင်းပြီ၊အဘယ်ကြောင့်သင်သည်ဤဖတ်ဝေး? ရင်တစ်ခုခုကဲ့သို့မြည်ကြောင်း၊သင်ခံစားစေခြင်းငှါ–သင့်ရဲ့အခမဲ့အကောင့်ကိုဖန်တီးယနေ့နှင့်ကြကုန်သင်ရတင်ဆောင်၊အချို့သောနှင့်အတူတက်အရသာဂိမ္းလိင်ပျော်စရာ။, ဒါဟာအပျော်အပါးအကြောင်းပြောဖို့အဘယ်အရာကိုကျနော်တို့ပေါ်တွင်ရရှိပါသည်အကမ်းလှမ်းချက်–သင့်ရဲ့အကောင့်ကိုဖန်တီးနှင့်အဘယ်ကြောင့်ကြည့်ရှုလူတိုင်းရဲ့အကြောင်းပြောနေတာ Yaoi လိင်ဂိမ်းများ။ ကျနော်တို့ဂုဏ်သတင်းအကြောင်းပြချက်များအတွက်:ဒါကြောင့်ကြောင့်မှကြွလာသောအခါဤနယ်ပယ်နှင့်ပေးခြင်းလူတိုင်းအတိအကျအဘယ်အရာကိုသူတို့အလိုဆန္ဒ၊အဘယ်သူမျှမတဦးတည်းကြွလာရန်နီးစပ်ရာကိုကျွန်တော်တို့လုပ်ဆောင်နိုင်။ ဒီတော့မည်။အခြားဘက်ခြမ်းအပေါ်? တက်လက်မှတ်ထိုးကြရဒီပါတီစတင်!